Himalaya Dainik » यो’नी किन चिलाउछ ? उपचार कसरी गर्ने ? (भिडियोसहित)
११ जेष्ठ २०७७ |
यो’नी किन चिलाउछ ? उपचार कसरी गर्ने ? (भिडियोसहित)
प्रायः जसो महिलामा यो’नी चि”लाउने समस्या हुन्छ । तर हाम्रो समाजमा अझै पनि यो’नी चिलाउने समस्यालाई सहजै बाहिर ल्याएको पाइँदैन । यौ-नी चिलाउने कारण र यसको समाधान कसरी गर्ने ?
समाजमा अझै पनि यो’नांगमा देखा पर्ने समस्यालाई सहजै बाहिर ल्याइँदैन । यौ-नां-गमा देखिएका सम’स्या भन्दा उत्ता’उ”लो लगायतका उपनाम दिई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रथा अझै पनि काय मै छ । जसको परिणाम स्वरुप यो-नां’गमा देखिएका समस्याले अन्य अंगमा पनि असर गर्ने अवस्था आउँछ । यौ’नां’गमा देखिने समस्यामध्ये यो’नी चि’लाउने समस्याले धेरैलाई पी’डा दिएको छ ।
यो-नी चिलाउने प्रमुख कारण :
स्टो’जन हर्मो’नको कमी । यो’नी फोहोर राख्नु । धेरै व्यक्तिसँग यौ’नस’म्पर्क राख्नु । विशेष गरेर महि’नावारीको समयमा प्रयोग गरिने प्या’ड तथा कपडा लामो समय राखिराख्नु , यो-नी सफा नगर्नु । नुहाँउदा यो”नीलाई असर पुर्याउने सावुन वा सेम्पो प्रयोग गर्नु । यो”नी प्राय जसो पहिलो पटक म’हिनावारी हुने उमेरका किशोरी तथा महिनावारी सुकेका महिलालाई बढी चिलाउँछ । यसको मूख्य कारण भनेकै स्ट्रोजन हर्मोनको कमी हुनु हो ।
बच्ने उपाय : यो’नी सधै सफा राख्ने । भित्र लगाउने कपडा प्रत्येक दिन परिवर्तन गर्ने । र’जस्व’ला हुँदा ३/३ घण्टामा प्या’ड वा कपडा परिवर्तन गर्ने । नुहाउँदा यो-नांगमा मात्र प्रयोग गर्ने स्याम्पो प्रयोग गर्ने । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो’नांगमा आवश्यक पर्ने केही किटाणु हुन्छन् । यो-नी यसरी लामो समयसम्म चिला-इरहे उपचार तत्काल गराउनु पर्छ ।
भिडियो हेर्नुस् ।
यो पनि पढ्नुस यो -नी चि’ला’उने समस्या भएकाहरुले घरेलु उपाय ।
महिलाहरु आफ्नो जीवनमा चिलाउने समस्याबाट गुज्रिएका हुन्छन् । कहिलेकाँहि यसो हुनु सामान्य भएपनि लामो समयसम्म चि’लाइराख्नु वा बारम्बार चि’लाइराख्नु भने राम्रो होइन ।
यो’नि चिला’उने स’मस्या धेरै कारणबाट हुन सक्छ । ती मध्ये प्रमुख कारण यो’नि राम्रोसँग सफा नगर्नाले यो सम’स्या उत्पन्न हुन जान्छ भने जथाभावि यौ”न सम्बन्ध’बाट हुने यौ”न रो-गबाट पनि यो-नि चिलाउँछ ।
यो नी चि’लाउने कारणहरु
१, त’नाव सुन्दा अचम्म लागेपनि यो सहि हो कि त’नावको कारणले गर्दा यो-नी चलाउँछ । २, यिस्ट सं’क्रमण यो-नीमा यिस्ट इन्फेक्सनको कारणले पनि यो-नि चिलाउँछ । यिस्ट इन्फेक्सन हुँदा यो-नी वरिपरि सेतो दही जस्तो ढुसी जम्मा हुन थाल्दछ जसको कारण यो-नी चिलाउँछ ।
३, सुख्खा छाला सुख्खा छाला भएको व्यक्तिमा पनि यो-नि चिलाउने सम’स्या बढी हुन्छ । छालालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानीको अभावले गर्दा यो-नी वरिपरीको छाला सुख्खा हुन जान्छ र चि’लाउ’न थाल्छ ।
४, यौ-न सं’क्रम’ण धेरै जनासँग यौ-न स’म्पर्क गर्नाले यौ-न रो’ग लाग्ने मात्रै नभइ यो-नी चिलाउने सम’स्या पनि शुरु हुन सक्छ । यी बाहेक यो-नीमा हुने संक्र’मण, चोटपटक, महि’नावरी बन्द हुनु आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा पनि यो”नीचिलाउने सम’स्या हुन सक्छ ।
-के कारणले गर्दा यो-नि चिलाएको हो त्यो थाहा पर्दछ । यदि धेरै जनासँग यौ’न सम्पर्कले यस्त सम’स्या
भएको हो भ’ने सबैभन्दा पहिले त्यस्तो कार्य बन्द गर्नु पर्दछ । २, कुनै रसा’यनिक पदार्थको प्रयोगबाट जस्तैः पर्फुमको प्रयोगले भो भने त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन ।
-बाथ टबमा नुहाउँदा भएको हो भने त्यसो गर्न छोड्नु राम्रो हुन्छ ।
-सुतिको पे’न्टी मात्र प्रयोग गर्ने र चिलाइ निको नभएसम्म राति सुत्दा पे’न्टी नलगाउनु राम्रो हुन्छ ।
-चिला’उन निको नभएसम्म यौ’नसम्प’र्क नराख्ने र राख्नै परे क’न्डमको प्रयोग गर्ने ।
-यो’नि सुख्खा हुने सम’स्या छ भने यौ’न सम्ब’न्ध राख्दा चिप्लो बनाउने चिल्लोको प्रयोग गर्ने ।
प्रकाशित मिति ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार २१:४४